ရခိုငျ့အောငျလံတျောလင်ျကာ – Arakanese Literature
Collection of articles on Arakanese literature and Culture
မိပန်းရံ ရေးဖွဲ့ခဲ့သော ရခိုင့်အောင်လံတော်လင်္ကာ
အင်းဝအမတ်ကြီး နန္ဒကျော်ထင်၏ သမီး ဖြစ်သည်သာမက ရခိုင်ဘုရင်တို့ထံတွင် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မင်းတိုင်ပင်အမတ်ကြီး အဖြစ်ခစားခဲ့သည့် ဗမာအမျိုးသမီးပညာရှင် မိပန်းရံ က ရခိုင်ပြည်၏ အစဉ်အလာ အောင်လံတော် အကြောင်းကို အောက်ပါ လင်္ကာရေးဖွဲ့လျက် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။
“ကြားပိမ့်ဗိုလ်လူ၊ အံ့ချီးမူလော့၊ သောင်းယူဇနာ၊ မြေမျက်နှာထက်၊ မြောက်မှာအာသံ၊ တောင်ရံသီဟိုဠ်၊ နောက်ကိုလှည့်လည်၊ မရွံပြည်နှင့်၊ ဦးတည်ပိုင်ခြင်း၊ ပင်လယ်ဆင်းအောင်၊ ဦးညွတ်ရာသည်၊ သာယာရွက်ဆောင်၊ ရန်တိုင်းအောင်သည့်၊ ဘုန်းခေါင် ဓမ္မရာဇာ၊ ဥက္ကာမုခ်မျိုး၊ သမုတ်ရိုးလျှင်၊ စံစိုးသောအခါ၊ ရက္ခာပူရ၊ ဓညမြို့ကြီး၊ တိုင်းလုံးထီးကို၊ ပြီးစီးခန့်ရည်၊ ရွှေနန်းတည်၍၊ အောင်စည်ညံညံ၊ ဘိသိက်ခံက၊ ကျော်သံသတင်း၊ သောင်းလုံးချင်းမျှ၊ မြင်းလည်း သိန္ဓ၀၊ နာဂဆန္ဒန်၊ ရန်မှန်ပယ်လှေ့၊ ခြင်္သေ့ကေသရီ၊ အောင်နီအောင်ဖြူ၊ ပဉ္စရူကို၊ ကြည်ဖြူနှစ်သက်၊ နတ်တို့ဆက်က၊ ဘုန်းကျက်သရေ၊ မိုးနှယ်စွေ၏၊ ရွှေငွေရတနာ၊ ပဒေသာသီး၊ ပြီးစီးစေတတ်၊ နတ်သမတ၊ စောင့်သီလနှင့်၊ ဣန္ဒ၀ဇီရာ၊ အင်္လကာရ၊ အစဖြန့်ချိ၊ သီရိဓဇ၊ ချိုမြသာယာ၊ နောက်ပိုက်မှာလည်း၊ မဟာသုဓမ္မ၊ ရာဇဂုရု၊ ရုန်းကာစု၍၊ မျက်ရှုခတ်နှိပ်၊ ရွှေတံဆိပ်ကို၊ စိပ်စိပ်ကြည်နူး၊ ရွှေနန်းဦး၌၊ ရွှင်မြူးကြည်ဖြူ၊ လှူတော်မူက၊ နတ်လူတကာ၊ ကောင်းချီးငြာလျက်၊ သာယာမြတ်နိုး၊ မေတ္တာဖြိုး၍၊ ရေမိုးမှန်စွာ၊ မြေသြဇာသည်၊ ရသာပြည့်နှက်၊ အောင်ဆုဆက်၍၊ ရာသက်တည်ကြောင်း၊ မျိုးသစ်လောင်းသည်၊ ရိုက်ချောင်းပဲ့တင်၊ ငြိမ်းငြိမ်းတည်း . . . ။”
ရခိုင်အောင်လံတော်မှာ အလျားကိုးတောင်၊ အနံခြောက်တောင်ရှိပြီး အထက် တဝက်ကို အဖြူရောင်၊ အောက်တဝက်ကို အနီရောင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားလေသည်။ လက်ဝဲ အထက်ဒေါင့်စွန်းတွင် သိန္ဓောမြင်းပျံရုပ်ကို လည်းကောင်း၊ လက်ယာဖက်အထက်ဒေါင့်အစွန်းတွင် ဆဒ္ဒန်ဆင်ဖြူရုပ်ကို လည်းကောင်း၊ လက်ဝဲဖက် အောက်ဒေါင့်စွန်းတွင် ကေသရာဇာခြင်္သေ့ရုပ်ကိုလည်းကောင်း၊ လက်ယာဖက်အောက်ဒေါင့်စွန်းတွင် ပဉ္စရူပရုပ်ကိုလည်းကောင်း ရေးဆွဲထားလေသည်။
အဖြူရောင်မှာ ရခိုင်တို့၏မျိုးစောင့်တရားသီလ ဖြူစင်ခြင်းကို ပြ၍ အနီရောင်မှာ ရဲရင့်တည်ကြည်သော ရခိုင့်သွေးအမှတ်အသား ဖြစ်သည်။ သိန္ဓောမြင်းပျံရုပ်မှာ ရခိုင်တို့၏စိတ်သဘောဖြောင့်စင်းသော တည့်မတ်သော သဘောကိုပြ၍ ဆဒ္ဒန်ဆင်ဖြူရုပ်မှာ ရခိုင်တို့ ၏မပြောက်မကျားပဲ ပကတိဖြူစင်သော ရခိုင်နွယ်ရိုးသန့်စင်မှုသဘော နှင့် ခြင်္သေ့ရုပ်မှာ ရခိုင်တို့၏ရဲရင့်တည်ကြည်မှုကို ပြလေသည်။ ပဉ္စရူပရုပ်မှာ ယင်းအမှတ်အသားအားလုံးကို စုပေါင်းသရုပ်ဖေါ်ခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ရှုဒေါင့်ဂျာနယ်၊ ၁၅-၅-၁၉၇၀-ခုနှစ်၊ စာမျက်နှာ(၂၃)၌ ပါရှိသောဆောင်းပါးမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။)
မူရင်းဆောင်းပါးသို့သွားရန် အောက်ပါ link ကို နှိပ်ပါ =>
“မိပနျးရံ”ရှုဒေါငျ့ဂြာနယျ၊ ၁၅-၅-၁၉၇၀-ခုနှဈ၊ စာမကျြနှာ(၂၃) ပါ ဆောငျးပါး
မိပနျးရံ ရေးဖှဲ့ခဲ့သော ရခိုငျ့အောငျလံတျောလင်ျကာ
အငျးဝအမတျကွီး နန်ဒကြျောထငျ၏ သမီး ဖွဈသညျသာမက ရခိုငျဘုရငျတို့ထံတှငျ မိမိကိုယျတိုငျလညျး မငျးတိုငျပငျအမတျကွီး အဖွဈခစားခဲ့သညျ့ ဗမာအမြိုးသမီးပညာရှငျ မိပနျးရံ က ရခိုငျပွညျ၏ အစဉျအလာ အောငျလံတျော အကွောငျးကို အောကျပါ လင်ျကာရေးဖှဲ့လကျြ မှတျတမျးတငျခဲ့ပါသညျ။
“ကွားပိမျ့ဗိုလျလူ၊ အံ့ခြီးမူလော့၊ သောငျးယူဇနာ၊ မွမေကျြနှာထကျ၊ မွောကျမှာအာသံ၊ တောငျရံသီဟိုဠျ၊ နောကျကိုလှညျ့လညျ၊ မရှံပွညျနှငျ့၊ ဦးတညျပိုငျခွငျး၊ ပငျလယျဆငျးအောငျ၊ ဦးညှတျရာသညျ၊ သာယာရှကျဆောငျ၊ ရနျတိုငျးအောငျသညျ့၊ ဘုနျးခေါငျ ဓမ်မရာဇာ၊ ဥက်ကာမုချမြိုး၊ သမုတျရိုးလြှငျ၊ စံစိုးသောအခါ၊ ရက်ခာပူရ၊ ဓညမွို့ကွီး၊ တိုငျးလုံးထီးကို၊ ပွီးစီးခနျ့ရညျ၊ ရှနေနျးတညျ၍၊ အောငျစညျညံညံ၊ ဘိသိကျခံက၊ ကြျောသံသတငျး၊ သောငျးလုံးခငျြးမြှ၊ မွငျးလညျး သိန်ဓဝ၊ နာဂဆန်ဒနျ၊ ရနျမှနျပယျလှေ့၊ ခွင်ျသကေ့သေရီ၊ အောငျနီအောငျဖွူ၊ ပ ဉ်စရူကို၊ ကွညျဖွူနှဈသကျ၊ နတျတို့ဆကျက၊ ဘုနျးကကျြသရေ၊ မိုးနှယျစှေ၏၊ ရှငှေရေတနာ၊ ပဒသောသီး၊ ပွီးစီးစတေတျ၊ နတျသမတ၊ စောငျ့သီလနှငျ့၊ ဣန်ဒဝဇီရာ၊ အင်ျလကာရ၊ အစဖွနျ့ခြိ၊ သီရိဓဇ၊ ခြိုမွသာယာ၊ နောကျပိုကျမှာလညျး၊ မဟာသုဓမ်မ၊ ရာဇဂုရု၊ ရုနျးကာစု၍၊ မကျြရှုခတျနှိပျ၊ ရှတေံဆိပျကို၊ စိပျစိပျကွညျနူး၊ ရှနေနျးဦး၌၊ ရှငျမွူးကွညျဖွူ၊ လှူတျောမူက၊ နတျလူတကာ၊ ကောငျးခြီးငွာလကျြ၊ သာယာမွတျနိုး၊ မတ်ေတာဖွိုး၍၊ ရမေိုးမှနျစှာ၊ မွသွေဇာသညျ၊ ရသာပွညျ့နှကျ၊ အောငျဆုဆကျ၍၊ ရာသကျတညျကွောငျး၊ မြိုးသဈလောငျးသညျ၊ ရိုကျခြောငျးပဲ့တငျ၊ ငွိမျးငွိမျးတညျး . . . ။”
ရခိုငျအောငျလံတျောမှာ အလြားကိုးတောငျ၊ အနံခွောကျတောငျရှိပွီး အထကျ တဝကျကို အဖွူရောငျ၊ အောကျတဝကျကို အနီရောငျဖွငျ့ ပွုလုပျထားလသေညျ။ လကျဝဲ အထကျဒေါငျ့စှနျးတှငျ သိန်ဓောမွငျးပြံရုပျကို လညျးကောငျး၊ လကျယာဖကျအထကျဒေါငျ့အစှနျးတှငျ ဆဒ်ဒနျဆငျဖွူရုပျကို လညျးကောငျး၊ လကျဝဲဖကျ အောကျဒေါငျ့စှနျးတှငျ ကသေရာဇာခွင်ျသရေု့ပျကိုလညျးကောငျး၊ လကျယာဖကျအောကျဒေါငျ့စှနျးတှငျ ပဉ်စရူပရုပျကိုလညျးကောငျး ရေးဆှဲထားလသေညျ။
အဖွူရောငျမှာ ရခိုငျတို့၏မြိုးစောငျ့တရားသီလ ဖွူစငျခွငျးကို ပွ၍ အနီရောငျမှာ ရဲရငျ့တညျကွညျသော ရခိုငျ့သှေးအမှတျအသား ဖွဈသညျ။ သိန်ဓောမွငျးပြံရုပျမှာ ရခိုငျတို့၏စိတျသဘောဖွောငျ့စငျးသော တညျ့မတျသော သဘောကိုပွ၍ ဆဒ်ဒနျဆငျဖွူရုပျမှာ ရခိုငျတို့ ၏မပွောကျမကြားပဲ ပကတိဖွူစငျသော ရခိုငျနှယျရိုးသနျ့စငျမှုသဘော နှငျ့ ခွင်ျသရေု့ပျမှာ ရခိုငျတို့၏ရဲရငျ့တညျကွညျမှုကို ပွလသေညျ။ ပဉ်စရူပရုပျမှာ ယငျးအမှတျအသားအားလုံးကို စုပေါငျးသရုပျဖျေါခွငျးပငျ ဖွဈလသေညျ။
(မှတျခကျြ။ ။ ရှုဒေါငျ့ဂြာနယျ၊ ၁၅-၅-၁၉၇၀-ခုနှဈ၊ စာမကျြနှာ(၂၃)၌ ပါရှိသောဆောငျးပါးမှ ကောကျနှုတျဖျောပွပါသညျ။)
မူရငျးဆောငျးပါးသို့သှားရနျ အောကျပါ link ကို နှိပျပါ =>
Arakan Traditional Flag
Mi Pan Ran